Jumlada jaakadda dhalada 12 oo leh qiimo wanaagsan - EPONT
EPONT Jumladda dhalada jack 12 oo leh qiimo wanaagsan - EPONT, alaabtayada waxaa inta badan loo dhoofiyaa in ka badan 30 waddan sida USA, Germany, Japan, Spain, Italy, UK, Korea, Australia, Canada iyo iwm. ku takhasusay tareen, baabuur, fargeeto iyo mishiinada dhismaha, waxaanu horeba iskaashi ula yeelanay in ka badan 10 ka mid ah shirkadaha 500 ee ugu sarreeya adduunka oo ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha waaweyn ee Shiinaha.
Alaabtu ma laha burooyin ku yaal geeskeeda iyo dusha sare. Si fiican ayaa loo gubay si looga saaro dhammaan qaybaha inta lagu jiro wax soo saarka.
1.Adeecadee ayaad bixin kartaa?
2.Ma tahay shirkad toos ah wax-soo-saare ama shirkad ganacsi?
3.Intee in le'eg ayaan heli karaa jawaab-celinta ka dib markaan u dirno weydiimaha?